Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Khamriga & Ruuxa » Rum waa Cuntada Maskaxdaada, Khamriga, iyo Hab -nololeedka New York
kariska • dhaqanka • Education • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan • Khamriga & Ruuxa
by Dr. Elinor Garely - wuxuu khaas u yahay eTN iyo tifaftiraha guud, wines.travel
9 min akhris
Inaad diyaar u tahay rum
Written by Dr. Elinor Garely - wuxuu khaas u yahay eTN iyo tifaftiraha guud, wines.travel
Rum waxaa lagu ridi karaa koox CUNTADA ah, ka dib - waxaa gebi ahaanba laga sameeyay canaasiirta sonkorta; xitaa waxaa laga yaabaa in loo tixgeliyo macmacaan, maxaa yeelay waa macaan. Si kastaba ha ahaatee, waa ruux waxaana la dhex dhigay cabbitaannada aalkolada leh faa'iidooyin gaar ah oo ay ku jiraan guryaha bakteeriyada, waxaana lagu taliyay in lagu daweeyo dhuunta strep.
Rumooyinka qaarkood way ka caafimaad badan yihiin kuwa kale, rumowga mugdiga ah, bidix ilaa geedka geedka la shiday ama foostooyinka alwaaxa ah oo siinaya midab madow iyo dhadhan adag, ayaa loo arkaa inay bixiyaan antioxidants caafimaad qaba.
Baadhitaannada qaarkood waxay soo jeedinayaan in rumtu leedahay hanti laga yaabo inay gacan ka geysato ilaalinta unugyada maskaxda.
Waxay kaloo yareyn kartaa khataraha la xiriira waallida iyo Alzheimers (David Friedman, Fayadhowrka Cuntada: Sida Loo Cuno Adduunyada Fads iyo Fiction).
Waa maxay Rum?
Rum waxaa laga sameeyaa wax-soo-saarka sonkorta sida molasses ama sharoobada sonkorta. Sonkorta waxaa lagu shubaa aalkolo dareere leh xoogag kala duwan iyo aalkolada cabbirka (ABV) waxay ka socotaa 40-80 boqolkiiba, iyadoo gaarsiineysa qiyaastii 97 kalori 8 oz. xabbad 80 caddayn ah (oo leh Coke, ku dar 88 kaloori oo kale). Tayada xantu waxay ku salaysan tahay halabuurka molasses -ka, dhererka halsano, nooca foostooyinka la isticmaalo, iyo dhererka waqtiga loo isticmaalo gabowga foostooyinka.
Rums -ka waxaa lagu kala saaraa midabka (tusaale ahaan, caddaan, madow/mugdi, dahab, aan adkaan karin), dhadhan (tusaale, xawaash/dhadhan) iyo da '. Rum madoobaadku wuxuu ku gaboobayaa 2+ sano foostooyinka geedkii la shiday oo samaynaya midab madow/bunni ah (oo aan la sifeynin ka dib geedi socodka gabowga). Rumta dahabka ama amber -ka ayaa ku dhex jirta foostooyin geedkii la gubay muddo gaaban (18 bilood). Karmel waxaa laga yaabaa in lagu daro geedi socodka gabowga si loo siiyo midab dahabi ah oo aad u muuqda. Rum cad (oo loo yaqaan lacag, iftiin ama cad) ayaa sida caadiga ah lagu kaydiyaa weelasha birta ka samaysan ee birta ah ama sanduuqyada waxayna da'doodu tahay 1-2 sano iyada oo la sifeeyo dhuxusha loo isticmaalo in lagu soo saaro midab kasta iyo nijaasta ka dib habka gabowga waxayna leedahay dhadhan ka fudud xammeed ama rummaan mugdi ah oo badiyaa laga helo cocktails halkii laga cuni lahaa nidaamsan. Rum udgoon ayaa la dhex geliyaa inta lagu jiro marxaladda isku dhafka leh qorfe, aniseed, sinjibiil, rosemary ama basbaas oo urursan ilaa 2.5 boqolkiiba. Rum udgoonku inta badan waa midab madow oo leh sonkor ama karamel marmar lagu daro macaan.
Rum ku xiran Adoonsiga, Kacdoon iyo Xanuun
In kasta oo rumeygu yahay mid dhadhan fiican leh isla markaana isku daraya xaflado iyo barbeque, cabbitaanku wuxuu leeyahay sheeko gadaal oo aad u madow. Taariikhdu waxay isku xireysaa rum (markii lagu qoday beeraha sonkorta qarnigii 17aad) iyo ku dhaqanka addoonsiga halkaas oo dadka lagu qasbay inay koraan oo gooyaan sonkorta iyagoo ku jira xaalado aad u xun. Shaqaaluhu waxay ku qasbanaadeen inay si hagar la'aan ah u shaqeeyaan si ay u khaldaan oo ay u qallajiyaan molasses si ay u sameeyaan xanta oo loo adeegsaday lacag ahaan si ay u iibsadaan addoomo badan.
Bilowgii (iyo dhowr qarniyo), tayada badeecadda waxaa loo tixgeliyey inay tahay mid liidata oo aan qaali ahayn, oo ay ugu horrayn cuneen addoommada beeritaanka sonkorta oo la xiriirta kooxaha dhaqan -dhaqaale ee hooseeya. Rum wuxuu kaloo kaalin taariikhi ah ku lahaa afgambigii milatari ee kaliya ee ka dhacay Australia, Rum Rebellion (1808), markii Guddoomiye William Bligh la afgembiyey qayb ahaan sababtuna tahay isku daygii uu ku baabi'inayay adeegsiga rum sida hab lacag bixin ah.
Ganacsiga addoonta ee badweynta Atlantikada wuxuu joogsaday qarnigii 19aad, si kastaba ha ahaatee, addoonsiga casriga ahi wuu sii socdaa (tusaale, warshadaha beeraha iyo dharka ayaa silsilado bixiya). Waaxda Shaqada ee Maraykanka ayaa ogaatay in ku -shaqaynta carruurtu ay ku badan tahay wax -soo -saarka sonkorta ee 18 dal. Beeraha qaarkood, shaqaaluhu waxay gacanta ku gooyaan bakoorad kulayl daran oo abuuraya khataro caafimaad. Cilmi -baaristu waxay ogaatay in culayska kulaylku uu horseedi karo horumarinta cudur kalyaha ah oo dabadheeraad ah.
Saadaasha Xogta Suuqa waxay ogaatay in suuqa rumaynta adduunka lagu qiimeeyo 25 bilyan oo doolar (2020) waxaana la saadaalinayaa inuu ku kici doono US $ 21.5 bilyan marka la gaaro 2025. Adduunka oo dhan dakhliga sanadlaha ah ee ka soo baxa wax soo saarka xanta ayaa lagu qiyaasay US $ 15.8 bilyan (2020) oo leh qiyaas kobac la saadaaliyay oo ah 7.0 boqolkiiba pa muddada 5ta sano ah (2020-2025) maaddaama ay sii kordhayso baahida caalamiga ah ee alaabada ruuxa ee tayo sare leh iyo kuwa raaxada leh oo diiradda la saarayo runnimada iyo sumcadaha caanka ah.
USA waa macaamilka ugu weyn ee xanta oo leh $ 2435 milyan oo laga soo saaray dakhli (2020) iyo mugga iibka oo labaad ka xiga vodka iyo whiskey -ka qaybta jinniyada. Soosaarayaasha ugu waaweyn ee rumaynta waa dalal ku yaal Laatiin Ameerika iyo Kariibiyaanka; si kastaba ha ahaatee, USA waxay ku leedahay bilawyo badan qaybtaan iyo sidoo kale Filibiin, India, Brazil, Fiji iyo Australia. Euromonitor International waxay ogaatay in Hindiya ay hormuud ka tahay suuqa rumaynta caalamiga ah.
Qaybta rumaynta cusub waxaa ku badan millennials (dadka dhashay intii u dhaxaysay 1981 iyo 1994/6) maaddaama rumtu ay tahay cabbitaan aad u jaban marka la barbar dhigo jinniyada kale. Suuqan bartilmaameedka ahi wuxuu leeyahay awood kharash -bixin wuxuuna muujiyaa qaddarinta khamriga oo leh doorbididda rum (ka badan cabbitaannada kale ee khamriga ah). Adduunyadu waxay ku qasbeysaa rumaynta in la beddelo iyadoo macaamiisha ay raadinayaan badeecooyin leh sonkor dhimay, oo waara, iyo heerar cayiman. Soo -saareyaasha Rum -ku waxay suuqyada ku soo bandhigeen badeecooyin rum ah oo cusub oo leh waayo -aragnimo dhadhan oo diiradda lagu saaray dhadhannada bixiya macaan, subag, karamel, miro kulaylaha, iyo qoraallada vanilj oo inta badan ku dhammaada liisaska sigaarka iyo molasses -ka.
Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn aqoon guud, laakiin rumeyn badan oo soo saarta dalalka ku yaal Kariibiyaanka Ha kobcin qasabka sonkorta iyaga oo dhab ahaantii soo dejiya qasabka sonkorta cayriin, casiirka qasabka ama mooska oo saldhig u ah iyo soo dejinta waxay u abuuraan caqabado cusub wadammada jasiiraddan.
1. Molasses, wax-soo-saarka sonkorta ayaa ka raqiisan marka loo isticmaalo qasabka sonkorta saafiga ah ee waxsoosaarka rum; si kastaba ha ahaatee, iyadoo baahida sonkorta ay hoos u dhacayso, soosaarka sonkorta ayaa hoos u dhacda sidaa darteed waxaa yaraaday jalaladii loo heli jiray dhoofinta. Dalabka sii yaraanaya ayaa sidoo kale hoos u riixaya qiimaha qasabka sonkorta waxayna tani ka walwalsan tahay soosaarayaasha xanta ee soo saarta jalaatada ayaa gabi ahaanba meesha ka bixi kara maadaama ay beeraleydu ka tagaan bakooradda sonkorta wax soo saarka beeraha oo faa'ido badan leh. Waxa kale oo jirta suurtogalnimada in isbedelka fayoobaantu ku dhiirri-gelin doono dawladaha ama hay'adaha kale ee sharci-dejinta inay soo rogaan xaddidaadyo sonkor ku jira oo saamayn ku leh helitaanka sonkorta iyo qiimaha badeecadda la dhammeeyey.
2. Geedi -socodka wax -soo -saarka waara ayaa muhiim u ah macaamiisha cabbitaanka cusub maadaama ay ka walaacsan yihiin inay qanciyaan baahidooda/rabitaankooda degdegga ah iyaga oo aan khatar gelin mustaqbalka. Soosaarka Rum -ku wuxuu sumcad ku leeyahay inuu soo saaro saamayn bey'adeed oo saraysa sababtuna waa baahida dhulka si loo beero bakooradda, shidaalka ayaa dalbaday inuu abuuro kuleyl si loogu beddelo bakooradda sonkorta cayriin ah oo loo beddeli karo mid dhexdhexaad ah iyo xaddiga biyaha loo isticmaalo wax soo saarka iyo kheyraadka loo isticmaalo baakadaha. Si loo daboolo baahiyaha joogtaynta, warshaduhu waa inay tixgeliyaan habab cusub oo loogu talagalay maareynta kheyraadka iyo/ama dhawrista oo ay abuuraan baakado leh nooleyaal ama bey'ad u wanaagsan.
Shirkadaha doonaya oo awood u leh inay tagaan masaafada, oo wax ka qabtaan baahiyaha hadda jira, waxaa jira war wanaagsan maadaama macaamiisha ay diyaar u yihiin inay bixiyaan qiimaha qaaliga ah ee badeecadaha cusub oo leh qiimo sare iyo kala saarid sare. Dahabka Rum wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo isbeddelka weyn ee xiga xagga jinniyada, iyadoo iibka la filayo uu kordhayo 33 boqolkiiba sannadka 2021. Heerka koritaankan, wuxuu ka sarreyn doonaa gin 2022 (internationaldrinkexpo.co.uk).
Dadka reer New York ayaa isku duuban Rum
Shirweynihii Rum ee fadhigiisu ahaa Manhattan ee dhowaan, Federico J. Hernandez iyo TheRumLab waxay abaabuleen barnaamij xiiso iyo waxbarasho leh oo ay weheliyaan dhadhamin shaqsiyeed oo ah dhibco badan oo rumow caalami ah oo ay ku riyaaqeen boqolaal saaxiibbo rum ah iyo taageerayaal. Rumooyinka cusub waxay bixiyaan waayo -aragnimo dareen leh oo kulma oo had iyo jeer dhaafa filashooyinka.
Barnaamijka waxaa ka mid ahaa:
Will Hoekenga, ARRO Report American Rum Report.com
Will Groves, Maggies Farm Rum. Pittsburg, PA
Karen Hoskin, Montanya Distillers, Butte Crested, CO
Roberto Serralles, Destileria Serralles Mercedita, PR
Daniel Mora, Ron Centenario, Rum -ka Costa Rico
Otto Flores, Barcelo Rums, Jamhuuriyadda Dominican
Waluco Maheia, Rums Copalli, Punta Gorda, Belize
Ian Williams, Qoraa, Rum: Taariikhda Bulsho iyo Bulsho ee Ruuxa Dhabta ah ee 1776
Bandhigga Rum ee soo socda ayaa loo qorsheeyay Sebtember 2021, San Francisco, CA. Macluumaad dheeri ah: californiarumfestival.com
E Dr. Elinor Si xamaasad leh. Qoraalkan xuquuqda daabacaadda ah, oo ay ku jiraan sawirro, dib looma soo saari karo iyada oo aan oggolaansho qoraal laga helin qoraaga.
Dr. Elinor Garely - wuxuu khaas u yahay eTN iyo tifaftiraha guud, wines.travel
10ka magaalo ee ugu wanaagsan nolosha ardayga ee habeenkii adduunka
Duulimaadyada Canada ilaa India ee Air Canada hadda
Madxafka Cusub ee Casriga ah (Moco) ayaa laga furay ...
Laba Doonyood oo Dalxiis ah oo Toddobaadkan ku Wacan Ocho Rios Jamaica
2021 Oshkosh wuxuu ka badan yahay filashooyinka qabanqaabiyeyaasha EAA ...
Tusahaaga Degdegga ah ee Qorshaynta Joogitaanka Georgia ...
Marriott wuxuu wanaajiyaa wacyi galinta ka ganacsiga dadka ...
Heshiiskii Dalxiiska Labada Dal ee Hindiya iyo Jarmalka oo La Saxiixay
Kooxaha Manchester United iyo Maltas oo guulo gaaray ...
Duulimaadyada Doha ku socda Madiina, Sacuudi Carabiya ee Qatar ...
Kalluunka Kathy wuxuu leeyahay,
September 5, 2021 at 13: 56
Waxay iila eg tahay doorasho wanaagsan aniga!